Maxaa lagu arkay guriga qunsulka Sacuudiga ee Istanbul oo la baaray? – Bandhiga
Maxaa lagu arkay guriga qunsulka Sacuudiga ee Istanbul oo la baaray?
Saraakiisha danbi-baarista ee Turkiga ayaa dhameeyey baaritaan socday 9-saac oo ay xalay ka wadeen guriga uu magaalada Istanbul ka degenaa Qunsulka Boqortooyada Sacuudiga.
Gurigan ayaa ah goobta labaad oo ay tageen kooxda la rumeysan yahay inay Qunsuliyada Sacuudiga ee Istanbul ku dileen suxufigii Jamal Khashoggi 2dii bishan Oktober.
Illaa iyo hada lama yaqaan waxa ay ka heleen guriga ay degenaayeen qoyska Qunsulka Sacuudiga oo isagu la sheegay inuu u baxsaday dalka Sacuudiga, goobtaasi ayaa ah halkii ay tageen kooxdii falkan geystay kadib markii ay ka baxeen xarunta Qunsuliyada wuxuuna dhowr tibaalo u jiraa gurigaasi isla xarunta Qunsuliyada, waxaana muuqaal ay horey u duubeen kamerooyinka CCTV ee Turkiga muujinayeen in gaadiidka la rumeysan yahay inuu saarnaa meydka suxufi Jamal uu gudaha u galay guriga Qunsulka kahor intaysan kooxda hawsha fulisay aysan ka dhoofin wadanka Turkiga.
Xigasho: the Guardine
Dowladda Federalka oo raaligelin deg deg ah ka dalbatay Jabuuti, kuna gacan seertay warbixintii IGAD